Deg deg, War, Bayaan aay Sowada sareen Odayaal dhaqmeedkii oramada iyo odayaal dhaqmeedka somaliland | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Deg deg, War, Bayaan aay Sowada sareen Odayaal dhaqmeedkii oramada iyo odayaal...
Deg deg, War, Bayaan aay Sowada sareen Odayaal dhaqmeedkii oramada iyo odayaal dhaqmeedka somaliland
War murtiyeed goor dhawayd soo baxay ayaa la sheegay in laga soo saaray kulamo ay wada qaateen madax dhaqameedka somaliland iyo weftigii dhigooda ahaa ee ka socday qoomiyada oromada ee dalka Itoobiya.
Warkan ayaa lagu sheegay in labada madax dhaqameed ee somaliland iyo Oromadu ay wada yeesheen kulamo kala duwan, iyada oo weftiga oromadu ay la kulmeen golaha guurtida somaliland iyo qaar ka mid ah ururada bulshada kuwaas oo falanqayn ku sameeyey qodobo ay ka mid ahaayeen deganaanshaha gobolka, amaanka, ganacsiga iyo dhaqanka.
War murtiyeedka ayaa lagu sheegay kulan balaadhan ay madax dhaqameedka somaliland iyo dhigooda qoomiyada oromadu ay ku yeesheen Hargeysa kaas oo ay ka soo saareen qodobadan.
In la aas aaso kulamo dhaqan
oo lagu xoojinayo xidhiidhka labada dal ee Itoobiya iyo soomaliland.
Labada dhinacba waxay aqoonsadeen waxyaabo badan oo ay wadaagaan labada dal iyo baahida loo qabo inay si dhaw u wada shaqeeyaan si loola dagaalamo dhibaatooyinka ay ka mid yihiin fakhriga,dagaalada sokeeye, tahriibinta dadka iyo amni darada gobolka.
Labada dhinac waxay isku raaceen inay sii wadaan xidhiidhkooda taariikhiga ah iyo midka ganacsi ee ka dhaxeeya.
Labada dhinac waxay isku raaceen in la soo xoojiyo xidhiidhka labada dale e haatan jira.
Madax dhaqameedka somaliland waxay soo jeediyeen in dawlada Itoobiya iyo madaxdhaqameedka Oromadu ay si wada jir ah uga shaqeeyaan xalinta khilaafka u dhaxeeya oromada iyo somalida Itoobiya.
Madax dhaqameedka Oromadu waxay balanqaadeen in kulanka labaad lagu qabto wadanka Itoobiya
Previous articleMuxuu yahay dowrka ciidammada badda Jabuuti ee xeebaha Soomaaliya?
Next articleDenmark oo ku dhawaaqday go’aan saameynaya 1000 qof oo Soomaali ah+Lacag la siinayo